ကွန့်မြူး မြင်းမိုရ်မီး ၊ညီးတဲ့ခါချိန်
သက္ကစ္စ ဂါရ၀နှင့် ၊ စဉ်အလာ ပူဇော်ပွဲကို
သီတင်းကျွတ်လသည် မြန်မာလများတွင် ခုနှစ်လမြောက်ဖြစ်ပြီး မိုးရာသီကုန်လုချိန်ဖြစ်ကာ စက်တင်ဘာလနှင့် အောက်တိုဘာလတွင် ကျရောက်သည်။
ဂေါတမရှင်တော်ဘုရားသည် မယ်တော်မိနတ်သားအား တာဝသိံသာနတ်ပြည်၌ အဘိဓမ္မာတရားတော်ကို ၀ါတွင်းသုံးလပတ် ဟောကြားတော်မူပြီး သီတင်းကျွတ်လပြည့်နေ့၌ လူ့ပြည်သို့ ပြန်လည်ကြွချီတော်မူ၏။ သိကြားမင်းက ရွှေစောင်းတန်း၊ ငွေစောင်းတန်း၊ ပတ္တမြားစောင်းတန်းတို့ကို ဖန်ဆင်းပူဇော်ပေသည်။ ဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်သည် ရောင်ခြည်တော်ခြောက်သွယ်ဖြင့် တင့်တယ်စွာ အလယ်ဗဟိုပတ္တမြားစောင်းတန်းမှ သက်ဆင်းကြွမြန်းတော်မူလေသည်။ နတ်အပေါင်းက လက်ယာ ရွှေစောင်းတန်း၊ ဗြဟ္မာကြီးများက လက်ဝဲ ငွေစောင်းတန်းမှ သက်ဆင်းလိုက်ပါလာကြ၏။
ယင်းပူဇော်ပွဲကြီးကို အစွဲပြု၍ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှု ရာသီပွဲတော်အဖြစ် သီတင်းကျွတ်လပြည့်နေ့ညတွင် ဘုရားရှင်ကို ရည်မှန်း၍ မီးရှူးမီးပန်းများ ၊ မီးပုံး၊ ဆီမီးရောင်စုံတို့ဖြင့် ပူဇော်မှုပြုလာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ တာဝတိံသာမှ ဆင်းသက်တော်မူသည်ကို အကြောင်းပြု၍ တာဝတိံသာပွဲတော် ၊ တာဝတိံသာနတ်ပြည်ရှိရာ မြင်းမိုရ်တောင်ထ်ိပ်မှ ဆင်းသက်တော်မူသည်ကို အကြောင်းပြု၍ မီးမြင်းမိုရ်ပွဲ ဟု ခေါ်ဝေါ်ကြသည်။
ရဟန်းတော်များသည် သီတင်းကျွတ်လပြည့်နေ့တွင် ၀ိနည်းဒေသနာတော်အရ ဥပုဒ်အစား "ဖိတ်ကြားခြင်း၊ တောင်းပန်တိုက်တွန်းခြင်း" ဟု အဓိပ္ပါယ်ရသော ပ၀ါရဏာပြုကြရ၏။ ဤပ၀ါရဏာပြုခြင်းသည် ဘုရားရှင် လက်ထက်ကပင် ပေါ်ပေါက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ သာဝတ္တိပြည်ဇေတ၀န်ကျောင်းတော်၌ သီတင်းသုံးဖော် ရဟန်းတစ်စု အချင်းချင်း မခေါ်မပြောနေထိုင်ကြသည်ကို အကြောင်းပြု၍ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုနည်းတူစွာပင် ဘုရားရှင်အား ဖူးမြှော်ကန်တော့သည့် အစဉ်အလာကို အစွဲပြု၍ မြန်မာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့သည် သီတင်းကျွတ်သည့်အခါ သက်ကြီးဝါကြီးများအား ပူဇော်ကန်တော့သည့် ဓလေ့ထုံးစံကောင်းတစ်ရပ်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့သည်။
Thadingyut is the seventh Myanmar month (in September-October) toward the end of the rainy season.
Lord Gautama Buddha preached The Abhidhamma to Maidawmi Nat ( reincarnate of His mother) in Tavatimasa Abode of celestial beings for three Lenten months and returned to the abode of men on the full-moon day of Thadingyut. The king of Celestials created gold, silver, ruby stairways for him. Buddha took the middle ruby one radiating six hues of aura. The nats came along by the right gold stairways and the brahmas by the left silver stairways.
On account of that , Myanmar Buddhists celebrate the full-moon day with multi-coloured illuminations. It is also called Tavatimsa Festival after the tavatimsa Abode of the nats and the Myintmo Lights Festival after the Mount Myinmo there.
For the Sangha it is the the time for what is known as Pawayana, which means inviting , entreating, urging. In practice since the times of Buddha, it is to beg on another for forgiveness of any action that might have displeased any other among Sangha. There is also the practice among laity of paying obeisance to parents and elders.
ရေးသားသူ may16 at Sunday, September 20, 2009
Angel Shaper September 21, 2009 at 8:58 AM
ပျော်လိုက်တာ။ သီတင်းကျွတ်အကြောင်းလေး သေချာနားမလည်မသိပဲ ပျော်ပဲပျော်ခဲ့ရတာ ခုတော့ ကျေးဇူးတင်စွာ ဖတ်သွားပါကြောင်းးးးးးးးးးး
သီဟသစ် September 21, 2009 at 5:02 PM
မပန်းကဗျာ မေ ၁၆ တို့ရေ
မိုးစက်အိမ် September 21, 2009 at 5:10 PM
ရှေးရှေးကဗျာကောင်းလေး တစ်ပုဒ်ဖတ်ရလို.ကျေးဇူးပါ အမတို.ရေ
kokomaung.uk September 22, 2009 at 3:45 AM
Waing September 22, 2009 at 10:13 AM
မှတ်သားဖွယ်ကောင်းပါတယ် လူကြီးသူမတွေကို ပူဇော်ကန်တော့တဲ့ပွဲတော်လေးအကြောင်းကို အခုမှ ပြည့်ပြည့်စုံစုံသိလိုက်ရလို့ ကျေးဇူးအထူးပင်တင်ရှိပါကြောင်း
Anonymous September 22, 2009 at 3:28 PM
သီတင်းတောင် ကျွတ်ပြီလား... မေ့တောင်နေပြီဗျာ...။